Na efa nanao tifi-danitra aza: tsy naharo ireo mpangalatra taolam-paty ny zandary | NewsMada
Na efa nanao tifi-danitra aza: tsy naharo ireo mpangalatra taolam-paty ny zandary
Niezaka nanao tifi-danitra ihany ny zandary hiarovana ny ain’ireo mpamaky fasana sy mpangalatra taolam-paty roa lahy tratran’ny fokonolona, ary notazonina tao amin’ny tobin’ny zandary, ao Antanambao Manampotsy, afakomaly. Tsy nampihemotra ireo fokonolona marobe nitaky fitsaram-bahoaka anefa izany.
Voasambotry ny fokonolona tao Antanambao Manampontsy ny jiolahy mpamaky fasana sy mpangalatra taolam-paty. Nirongatra izaitsizy ity tranga ity, nandritra ny taona 2018, tao amin’ny disitrikan’Antanambao Manampontsy. Vokany, iray voasambotra voalohany ary nilaza anaran’olona maromaro izy. Nosamborin’ny zandary avokoa izay olona nolazain’ilay voasambotra voalohany. Taorian’ izay, nirohotra namonjy ny tobin’ny zandary ny fokonolona nangataka ny hamoahana ireo voasambotra fa hanaovana fitsaram-bahoaka. Nanda izany ny zandary ka niakatra ny hatezeran’ny fokonolona efa saika ny iray tanana sy ireo avy amin’ny fokontany manodidina.
Raikitra ny tora-bato sy fanafihana toby ary nahasimbana ny tafon-tranon’ny tobin’ny
Zandary. Niezaka nanao tifi-danitra, noho izany, ny zandary, saingy tsy nampihemotra ny fokonolona izany. Tratra’ny be no ho vitsy ny zandary ka tsy maintsy nampandositra niala tao amin’ny toby ireo olona enina efa voasambotra.
Tsikaritry ny fokonolona izany ary nifanenjehan’izy ireo ka voasambony ny roa raha tafaporitsaka kosa ny efatra hafa. Raikitra ny fikasana hamono sy hanapitra ny ain’ireto roa lahy voasambotra.
Voasorok’ ireo tangalamena
Ankilany kosa, raha niala maina tsy afa-niaro ny ain’ireo voalaza fa jiolahy mpamaky fasana ny zandary, nitsangana sy nandray ny andraikiny ny tangalamena ao an-toerana ka nandrara ny tsy hanaperana ny ain’ireo voasambotra. Vokany, nofatoran’ny fokonolona teo am-bodihazo izy roa lahy. Nomena sakafo sy rano mba tsy ho faty ary nanaraka ny hafatry ny tangalamena ny fokonolona. Na izany aza, tsy voasakana tamin’ny fanimbana ny tranon’ireo efatra tafaporitsaka ny fokonolona. Trano fivarotana avokoa.
Nambaran’ireo tangalamena fa tsy maintsy atao aloha ny hisamborana sy hikarohana ireo tafaporitsaka ka aleo ny famotorana mifanaraka amin’ny lalàna velona eto amin’ny tany sy fanjakana no tanterahina.
Vokatr’ity tanga ity, lasa tanàna maty ny ao Antanambao Manampontsy, omaly. Nikatona avokoa ny trano fivarotana rehetra. Tapaka ny herinaratra; ny vahiny, matahotra ka lasa miafinafina avokoa. Andaniny, raha vao nahare ity tranga ity ireo manana fasana vaky hatramin’ny fiandohan’ny taona 2018, tonga niakatra ao amin’ny renivohitr’Antanambao Manampontsy avokoa, hatramin’ireo avy any Vatomandry.